Indlela yokufumana ukutya
Indlela yokufunda ukuba ungabi nokwesaba ukutya, ukukholelwa ekusebenzeni kwawo kwaye ukufezekisa impumelelo efanayo? Ngamacebiso ethu kulula! Ngoko, ukutya: umsebenzi uyenzeka!
Ukutya yindlela yokuphila kunye nemithetho ethile yokutya. Sisebenzise ukunyanga njengento yesikhashana: Ndiza kuhlala iiveki kwi-kefir / ii-apples / ijezi, kodwa ke-oh-oh! Kodwa musa ukulibala ukuba ukuba sihlala phantsi naluphi na ukutya, uze uqale ukutya njengangaphambili, iinzuzo zolu hlobo luzama. Emva koko, kufuneka ujabulele ubomi, kuquka ukuzonwabisa nokutya. Ngoko ke kubuwula ukuziphika yonke into. Lapha ufuna ukulinganisela kunye nendlela eya kummandla kunye nomgangatho wesondlo. Isimo sengqondo esifanelekileyo kunye nokusebenza ngokubanzi kufuneka kube ngabahlobo bakho abakhulu!
Ndiyifumene injongo - andiyikuboni imiqobo
Okokuqala sifanele sigqibe isigqibo esiphezulu. Kutheni sifuna ngempela ukutya? Injongo yokuqala kukuba, ukuba, ukunciphisa umzimba, ukunciphisa ubunzima. Okwesibini ukucoca umzimba okanye ukuphilisa impilo. Oogqirha bathi ngamanye amaxesha kuyakunceda ukuhamba ukutya ukuze unike umzimba umzimba. Nangemva kokuba senze iintsuku ezimbini zokuzila, siziva sizikhanya kwaye siphila. Kodwa ngokuqhelekileyo inkqubo yokutya ibonakala njengale: phulaphula, funda izibuyekezo, khetha ukutya okutsha, unamathele kuyo, ukholelwa ukuba ngeveki inani liya kufana nelona lifanelekileyo. Kodwa xa sithembela kwinto ethile ixesha elide, ngokukhawuleza kamva "sifuna!" ziya kuphuma ngaphesheya, kwaye umzimba uya kufuna ngokukhawuleza ikhekhe okanye ithokoleta. Ngako oko, akuyiyo imifanekiso engcono kakhulu: sasihleli kwisondlo, siphumelele umphumo, kodwa ngokutya okuvinjelwe kukukhwela ngamandla. Emva koko simele esikalini kwaye siqaphele ukuba ubunzima bubuyele. Kwiimvakalelo ezixhalabileyo, sihlala phantsi kwesinye isidlo, sicinga ukuba le yangaphambili ayizange iphumelele. Le ngqungquthela enesibindi, kodwa ngexesha ngalinye elitsha umnqweno wokuhlala phantsi kwisondlo kuya kuba ngaphantsi.
Ngoko, ukuba sinqume ukutya ngokwecebo elithile, ngoko kufuneka simamathe rhoqo. Umzimba uza kusetshenziselwa ukutya okutsha, nje ukunika ixesha. Gwema ukutya okunqandekileyo, njengokuba utshintsho olubukhali kukutya okuqinileyo kukuxinzeleleka komzimba, onokuzibonakalisa ekukhathala, ukunganakwa, ukungahambi kakuhle kunye neengxaki zempilo. Ngenxa yesithintelo esiqinileyo ekudleni, siyakudityaniswa ngokutya okuqhelekileyo. Ukongeza, ngenxa yomsebenzi ogcweleyo womzimba, ufuna iimfuno ezahlukeneyo ngokutya. Ngako oko, kufuneka uhlakulele umkhwa wesondlo esifanelekileyo ebomini bakho bonke uze ulandele, kwaye ungazitholi iintlobo ezahlukeneyo zokutya kwaye kufuneka wenze oku ngokuthe ngcembe. Usuku emva komhla, yenza utshintsho ekudleni kwakho, uvumele umzimba usebenzise ukutshintsha.
Ukuhlala ngendlela entsha
Akukho nto inzima ukuyidla ngokufanelekileyo. Kodwa izibonelelo kunye neziphumo zicacile. Ngoko, imigaqo eyisiseko yile:
Kunconywa ukuthatha ukutya amaxesha angama 4-6 ngosuku kwiindawo ezincinci. Oku kungcono kunokutya kanye kuphela, kodwa ngaphambi kokuba inqwaba - ngoko umzimba uya kuba nzima ukugaya inani elidliwayo. Kwaye ukuba sithatha isahlulo sokutya, kodwa ngokuqhelekileyo, asiyi kuva nelambile kwaye impilo yonke iya kuba ngcono.
Isidlo sokugqibela kufuneka sibe ubuncinane kwiiyure ezingama-3 ngaphambi kokulala. Ukuba awufuni ukuya kulala ulambile - uphuze itiye nobusi okanye iglasi ye yogurt.
Izondlo zicebisa ukutya ukutya okuncinane okunamafutha, ingakumbi ugweme ukuxuba amayeza kunye nezilwanyana zezilwanyana.
Zama ukuqapha umxholo wekhalori weemveliso. Izinga lemihla ngemihla liyi-1500-1900 kilocalories, kodwa yonke into incike kakhulu kwimpilo yakho, ukuba usebenza njani.
Kwinkqubo yokusebenza ngokwakho kubaluleke kakhulu ukucinga ukuba uyincinci. Unokwenza uluhlu lweebhonasi eziya kukukhokelela ekulahlekeni kwesisindo sakho - ezi ziya kuba ngabaxhasi bakho abongezelelweyo. Ukusuka kwinqanaba leengqondo, kubalulekile ukuvumela umzimba wakho kunye neengqondo ziqonde ukuba awuyi kuzingcwina, umkhawulo kwinto ethile, nyanzela. Ukuba ufuna imvakalelo emihle, esikhundleni sokuya kwivenkile yekhekhe, hamba nabahlobo ngokuhamba, ukuya kwibala lezemidlalo, igalari, igalari, ukuya kwikhonsathi, ubukele i-movie. Ukwahlula ixesha lakho lokuphumla, kwaye ke awuyi kuba nexesha lokukhula, kwaye ebomini kuya kuba nemihlali eninzi.
Endleleni eya kunqoba
Enye yezinto ezixhalabisayo xa unokuhlangabezana nayo xa ukondla ukwesaba ukungahlangabezane nezilindelo zakho: zakho okanye abo bakuzungezile. Ngokomzekelo, sinokuqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba isizathu sokungaphumeleli emsebenzini, ukungabikho kwengqwalasela kumntu wesini esahlukileyo, ngokuqhelekileyo yonke into ebunzima yehlabathi, kukunyamezela kwethu, kodwa ukuziphatha kwethu, ubuchule, indlela yokuphila kunye neempawu ezingenalo nantoni na. . Sicinga ukuba ngokukhawuleza xa siba slimmer, zonke ezi ngxaki ziya kutshabalala kunye neentimitha ezingaphezulu. Kodwa oku akunjalo.
Izigqibo : Amadoda athonywa ukuzithemba nokuzithoba kwethu, ubuhle obungaphakathi kunye nokuzola, kungekhona umlinganiselo kwisilinganiselo kunye nosayizi wezambatho. Abantu abakujikelezile bazive, nokuba sithanda thina okanye hayi. Umntu, enelisekile yena kunye nomzimba wakhe, useburhulumenteni. Ukuxhatshazwa nokungazinzi kubambiswano olubi. Ukuzihlonela kuya kukukhokelela kwisiphumo esifunileyo. Yithande umzimba wakho, yamkele-kwaye iya kukuphendula ngokufanayo.
Izenzo : Thatha ixesha elide, jonga impilo yakho nentlalo, ungalibali ngeempawu zakho ezilungileyo, xabisa ukuphumelela kwakho okuncinci. Zama kwimifanekiso emitsha, utshintshe umfanekiso wakho nsuku zonke, mahluke onke amaxesha. Ziziphephe ngokuthenga okanye i-hairdo entsha, into eyona nto kukuqinisekisa ukuba uvakalelwa kakuhle.
Zonke ngokutsho kwesicwangciso
Izilingo zezilwanyana zinzima ukuchasa, ngakumbi xa uhlala unqanda ukutya. Kodwa ubuthathaka obuncinane bunokudlulela phambili iinzame zangaphambili zokuzisebenza. Ngoko ke, ukuphumelela kokutya kukuxhomekeke kumandla okuthanda kunye nomlingiswa.
Izigqibo : Inxaxheba ebaluleke kakhulu idlala ngokutya okucacileyo nokuqhelekileyo. Ngaba ukwesaba ukuba ungawaphula? Nquma ngesisusa, ziphendule kumbuzo othi "Kutheni ndilahlekelwa ngumzimba?"
Isenzo : Misela iinjongo ezicacileyo kunye nexesha lokufikelela kuyo. Ufuna isicwangciso: isicwangciso kunye namaqhinga okulahlekelwa ubunzima. Ukuchonga imenyu efanelekileyo kuwe, ukuhlakulela isethi yokuzivocavoca umzimba kwaye uqale idayari yesondlo, rhoqo uhlola ubunzima bakho. Ziqeqeshe ukuba udle imihla ngemihla ngexesha elifanayo, ngoko iinkqubo zakho zokuxilonga ziya kuphucula. Kwaye ukuba ufuna ngokwenene into enhle okanye engekho luncedo, kungcono ukwanelise i-whim yakho ekuseni.
Izizathu zokubonakala kobunzima obuninzi, zonke izinto zilapha apha. Oku kungabonakalisa umonakalo, kunye nokuphila okungalunganga, uxinzelelo kunye nantoni na. Kwaye ukuphumelela kokutya okanye ukuphazamiseka kuxhomekeke kwimeko yethu yesimo sengqondo kunye nesimo sengqondo. Ngoko ke, okokuqala kufuneka ubuyisele umyalelo kwiingcamango zakho, kwaye emva kwentloko ecocekileyo ukuhlala kwisondlo. Asinakho ukwaneliswa yembonakalo yethu, kuba asihlangani nemigangatho yanamhlanje. Kwaye esikhundleni sokubulela imizimba yethu ngenkonzo yokwethembeka, siyisebenzisa kakubi.
Isiphelo : Akuyimfuneko ukuzamekela loo migangatho yobuhle esabekwe yona. Kubaluleke kakhulu ukuhlala wena kwaye ungalibali ngokulungileyo, kuba iingcamango zethu zibandakanya ubomi boqobo.
Iimpawu : Vulela iingxaki zakho kwii-shelves: zeziphi ihlabathi, kwaye ezingabalulekanga. Cinga ngeendlela ozikhethayo kwisisombululo sabo, hamba umbuzo ngamnye ophazamisayo. Kwakhona kubaluleke kakhulu ukuba ubeke ixesha, xa unokuthi uzinzile ubeke iingcamango zakho ngokukodwa, ubuncinane kanye kwinyanga nje vele uvele ucinge. Ungalibali ukucoca zonke iinkcukacha ozibonayo kwaye uzive. Hlola, ngaba uyayifuna? Iyintoni na inzuzo?
Emva kokuba uqaphele kwaye uhlalutye izizathu zokuphelela kwakho, unokuqhubeka ukuya kwisinyathelo esilandelayo ekukhuseleni ubuninzi beenyawo. Okokuqala misela isisindo esihle. Yaye kunye nexesha ongayifumana ngalo, ukuhla kwesilinganiso se 1-2 kg ngeveki. Ukulahleka ngokukhawuleza kakhulu kuya kuba yinye ingcinezelo yomzimba. Kule meko, ezimbini iindlela zokukhetha ziyakwenzeka: owokuqala-umzimba uza kuzama ukugcina yonke into ekugcinwe kuyo, oko kukuthi, ngesinye isikhathi ubunzima buya kunqanda ukunciphisa okanye nokuba nokwanda; Okwesibini-ephefumlelwe yintsindiso yakho, uya kukhangela ukulahlekelwa ubunzima kwaye uvelise umzimba wakho. Khumbula - kuyo yonke imilinganiselo ebalulekileyo!
Izenzo eziphumelelayo zokulahleka kwesisindo esiphuthumayo
Iintlobo kunye neengxaki ze-bodyflex
Izenzo zokuphefumula zokulahleka kwesisindo
Uhlobo lwezemidlalo, kuxhomekeke kumqondiso we-zodiac
Ikhononi Jelly kunye neM Mango
Ikheka leqabunga laseAlaska
Izindlela zokukhulisa abantwana engozini
Imibala yaseTerkotta ebomini bethu
Indlela yokubutha ubuso bakho ngeepuni
Intlama ebuhlungu ebisi
Kwiimfuno kunye neentlanzi zekhofi elimnandi
Isobho seTatato nge zucchini
Indlela yokukhetha isitofu segesi esakhiweyo?
Intloko enkulu yomntwana
Ziziphi iindlela zokuzicoca azikhuselekanga?